All important information of the STEEM user: minsoenaing - STEEMIT Holmes
Accounts ID: 245236
Accounts Name: minsoenaing
Post Count 6,281
Voting Power: 8,819
Current Mana 1,399,677,862,822
Last Post 2020-03-23T02:44:09
Last Root Post 2020-03-23T02:44:09
Last Vote Time 2020-04-01T23:50:48
Vesting Reward Balance 4,610 VESTS
Vesting Reward Steem2STEEM
Vesting Shares 1,891,574 VESTS
Delegated Vesting Shares 304,115 VESTS
Vesting Withdraw Rate 343 VESTS
To Withdraw 4,460,307,600
Curation Rewards 72,214
Posting Rewards 1,289,248
My Actifit Report Card: March 22 2020
I got up at4in the morning. It starts at 5:00. Head east for about halfamile, I break south and walk another half mile to the preschool. On the way, the office met some friends. A total of2hours of walking. 6068 Walking ... more
2020-03-22 13:15:57 Block Num: 41,874,365
ဤ Group ကိုထူထောင်ရခြင်းအကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုသွားနေသည်ဟု တရားဝင်ပြောကြားထား သည်။ သို့သော်လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အဆင်မပြေမှုများကသေချာပေါက်ရှိနေသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်ဘက်က အထက်ပိုင်းလူကြီးတွေ အချင်း ချင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသင့်ကြောင်းပြောသည်။ ဒေါက်တာမြဉာဏစိုးက ဒီလိုလုပ်ရင်ဥပဒေနှင့်မညီဟုဆိုသည်။ ဒေါက်တာမြဉာဏစိုးပြောတာကိုကျွန် တော်မငြင်းပါ။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် တပ်ကိုယ် စားလှယ်များ လွှတ်တော်တွင်းပါဝင်နေခြင်းမှာ ဥပဒေအရဖြစ်သော်လည်း ဒီမိ ... more
2020-03-20 04:42:39 Block Num: 41,807,626
2020-03-20 03:59:48 Block Num: 41,806,769
လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာ လူတော်တော်များများဟာ လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာ ကိုနားမလည်ကြဘူး။ ပိုက်ဆံမရှိလို့သာ ငြိမ်နေကြပေမယ့်။ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ လိုချင်တာတွေပြေးဝယ်ကြတာပဲ။ လိုချင်ပဲဝယ်မှာပေါ့လို့ ပြောကြမှာပါ။ အဲတာကပဲ လူတွေကိုဆင်းရဲစေပြီး လူမွေးလူတောင် မပြောင်စေတော့တဲ့အချက်ပဲဆိုတာ နားလည်တဲ့သူအလွန်ရှားပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ လိုအပ်တာက မရှိမဖြစ်လို့ မသုံးမဖြစ်လို့သုံးရတာဖြစ်ပြီး လိုချင်တာကြတော့ ပိုက်ဆံသာရှိရင်နောက်ရေးတွေ၊ ရှေ့ရေးတွေ တွေးမနေပဲ ဝယ်ပြစ်ချင်ကြတာပါ။ နောက်တော့သာ အဲဒီအရာတွေ အိမ်မှာပုံနေပြီး ပြန် ... more
2020-03-19 01:34:09 Block Num: 41,775,102
လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာ လူတော်တော်များများဟာ လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာ ကိုနားမလည်ကြဘူး။ ပိုက်ဆံမရှိလို့သာ ငြိမ်နေကြပေမယ့်။ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ လိုချင်တာတွေပြေးဝယ်ကြတာပဲ။ လိုချင်ပဲဝယ်မှာပေါ့လို့ ပြောကြမှာပါ။ အဲတာကပဲ လူတွေကိုဆင်းရဲစေပြီး လူမွေးလူတောင် မပြောင်စေတော့တဲ့အချက်ပဲဆိုတာ နားလည်တဲ့သူအလွန်ရှားပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ လိုအပ်တာက မရှိမဖြစ်လို့ မသုံးမဖြစ်လို့သုံးရတာဖြစ်ပြီး လိုချင်တာကြတော့ ပိုက်ဆံသာရှိရင်နောက်ရေးတွေ၊ ရှေ့ရေးတွေ တွေးမနေပဲ ဝယ်ပြစ်ချင်ကြတာပါ။ နောက်တော့သာ အဲဒီအရာတွေ အိမ်မှာပုံနေပြီး ပြန ... more
2020-03-19 01:31:33 Block Num: 41,775,050
My Actifit Report Card: March 16 2020
I got up at5in the morning. It starts at 6:00. Head east for about halfamile, I break south and walk another half mile to the preschool. On the way, the office met some friends. In total, we walked about 1:30 hours. It was lower than yesterday's record. 6862 Walking ... more
2020-03-16 04:12:36 Block Num: 41,692,016
My Actifit Report Card: March 15 2020
I got up at5in the morning. It starts at 6:00. Head east for about halfamile, I break south and walk another half mile to the preschool. On the way, the office met some friends. In total, we walked about 1:30 hours. It was lower than yesterday's record. 5641 Walking ... more
2020-03-15 14:43:18 Block Num: 41,675,854
ပညာတတ်အတု ပညာတတ်တာမတတ်တာ အတုဆိုတာရှိပါ့မလားဗျာ။ တတ်ရင်တတ်တယ် မတတ်ရင်မတတ်ဘူးပဲမို့လား။ မဟုတ်ဘူး။ပညာတတ်အတုဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာပါ။ သူ့အတန်းက ဒုတိယတန်းပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတောတိုးနိုင်တဲ့အသိတွေရှိလာအောင် ကျွန်တော်က နှစ်ပေါင်းများစွာ သင်ပြခဲ့တယ်။ ဒါရဲ့အကျိုးဆက်က သူဟာလူ့ဘဝမှာအခြားပညာတတ်တစ်ယောက် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သလိုမျိုးနေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကမရိုးသားဘူး။ရိုးသားမှုကို ကျွန်တော်လည်းသင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဥပမာတကယ့်ပညာတတ်တစ်ယောက်ဟာ သူတပါးသံသယဖြစ်မှာမစိုးရိမ်ဘူ ... more
2020-03-13 09:15:21 Block Num: 41,611,796
"name": "Min Soe Naing",
"about": "Engineer ",
"location": "Nay Pyi Taw",